China IP67 keteni yakatungamira mitsetse yechiedza vagadziri uye vanotengesa | Huayuemei
Chinhu Isina mvura Keteni LED Strip
Tsanangudzo 277.2 * 16.8 * 1.6mm
Akatungamirira Qty 4PCS
Ruvara rwemavara 2800-12000K (yakagadzirirwa)
Simba 3.6w / bv
LED lattice backlight (LED keteni, LED yemishenjere inotsvedza); LATTICE LED Matrix Lighting System ndiyo yakanyanya kuwanda uye inoshanda mhinduro yekuvhenekesa yemukati uye yekunze chiratidzo makabati uye yakakura nzvimbo kuvhenekera.
Inovandudza dhizaini yeLATTICE sisitimu inouya isina kureruka nyore-kuisa-roll, iyo inobvumidza kuve nyore huwandu hweakakwana akapatsanurwa maLED mumaminetsi eunifomu backlit mwenje.
Iyi LED lattice backlight inoshandisa yakakwenenzverwa yakatungamirwa machipisi ane pamberi lens anotendera yakadzika kudzika, kuburitsa yunifomu Chiedza, isina mavara anoonekwa pane chiratidzo pamusoro;
LED backlighting yemwenje mabhokisi inoshandisa imwechete-padivi pechiedza mwenje module yemwenje yakavhenekerwa makabati, kushambadzira bhodhi, kuratidza pani uye akati wandei marudzi eakawanda akasarudzika akasarudzika kumashure magetsi ekushandisa;
Lattice backlit module ine kupenya kwakanakisa pane yakaderera simba rekushandisa, Yakanakira backlit madziro kana asina kumeso kumeso mwenje mabhokisi kumashure emwenje makiti;
LED lattice backlight ine hunyanzvi dhizaini yetiketi system inouya isina huremu, Easy Labor-yekuisa Kuisirwa;
Kuvhenekesa kwe LED kwemabhokisi emwenje aine nyowani uye yakavandudzwa vhezheni yepakutanga lattice, ine yakavimbika uye inofungidzirwa mhedzisiro yemwenje, kuwedzera kuvimbika, kurarama kwenguva refu, uye tekinoroji yazvino yazvino.
Kubatsira & Services
1. Icho chisina mvura isina mvura Curtain LED Strip. Inokodzera bhenekeri rekunze bhokisi.
2.Adopt yakazara jekiseni kuumbwa, isina giredhi inogona kusvika IP67.
3. Inoda maturusi mashoma uye isina hunyanzvi, iyo isina mvura Curtain LED inogona kumanikidzwa nyore nyore uye kugadziridzwa kune chero saizi kana chimiro
4. Uniform mwenje, kunzvenga hotspots.
5.Tinogona zvinoenderana nechikumbiro chako kuti tiite mhinduro yakanakira iwe.
7.Warranty makore matatu.
8. Isu tinopa vatengi vedu eco-inoshamwaridzika zvinhu uye zvigadzirwa.
Iyo inoshandira kushambadzira machira emwenje bhokisi & kutambanudza celling, Yakanaka sarudzo yeKushambadzira Mwenje Mabhokisi / Ratidza Sign Bhodhi Backlighting ... shingairirawo cheni chitoro, hotera, zvitoro, subway, airport, chiteshi etc.Mukati uye Kunze Sign Sign Makabati ,Makuru Ekushambadzira Chiedza Mabhokisi, Yemukati Yakavhenekerwa Mabhodhi, Makuru Signage Ratidza Nzvimbo, Yakasarudzika & Ruviri Signboard, Yakakura Poster mwenje mabhokisi.
Pashure: RGB 3030 Curtain LED Strip
Zvadaro: 3030 lattice yakatungamirwa mutsara
yakatungamira lattice mwenje
IP65 manera akatungamirwa mwenje